Villareal 0-2 Manchester United, Red Devils Oo U Gudubtay Wareegaya 16aad Ee Champions League-ga
HomeWararka CiyaarahaVillareal 0-2 Manchester United, Red Devils oo u gudubtay Wareegaya 16aad ee Champions league-ga
kooxda Manchester United ayaa guul ka gaartay kooxda Villareal oo booqasho loo ahaa iyadoo sidaasi ugu gudubtay wareega 16aad ee Champions league-ga kulan ku soo dhamaday 0-2,
Manchester United ayaa labada gool ee kulankan ka heshay xidigaha kala ah Ronaldo iyo Jadon Sancho.
Kubbad uu goolhayaha Villarreal ee Geronimo Rulli u dhiibay Capoue oo cidhiidhi ku jira ayaa waxa hirdan dhex maray Fred uu sababay in kubaddu ay u tagto Ronaldo oo goolka hortiisa taagan, kaas oo goolhayaha daba mariyey xili goolhayaha oo soo baxay Daqiiqadii 78aad ee ciyaarta.
Jadon Sancho ayaa furtay xisaabtiisa goolaha Manchester United daqiiqaddii 90aad ee dhamaadka ciyaarta, markaas oo uu shabaqa taabsiiyey gool in badan laga sugayey oo uu hoggaanka ugu sii dheereeyey kooxdiisa, guushana damaanad ugaga dhigay kulanka ayaana ku soo dhamaaday 0-2.
Manchester United ayaa hoggaanka u qabatay Group F, waxaanay yeelatay 10 dhibcood, halka Villarreal oo labaad ku jirta ay saddex dhibcood ka horreyso, labadii lugoodna ay garaacday, taas oo xataa haddii ay dhibco ahaan soo gaadho aan dhaafi karin, halka Atalanta oo Young la ciyaaraysa ay iyadana ka horreyso shan dhibcood.
Manchester United haddii xataa laga badiyo ciyaarta u hadhsan waxay xaqiijisatay inay soo baxday, sababtoo ah mar walba waxay ka horreyn doontaa Villarreal.